Yinkulu indima esikhathuliwe ukulungisa inkinga yokushoda kukagesi. Nokho kukhona lapho kusashoda khona kancane, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Lokhu kungase kudobe abatshalimali abasha ekukhiqizeni ugesi futhi kulekelele ukuxazulula inkinga yokushoda kwawo. Izibalo zithi cishe kunogesi owu-10GW ongase ube khona eminyakeni eyisikhombisa ezayo (okuyikota yenani likagesi elikhona manje) kanti loku kungase kuholele ekutheni kutshalwe uR150 billion. Omunye ugesi osetshenziswa manje ngeke usasetshenziswa, nokuzokwenza wande ugesi okhona.
Ukushicilelwa kwalo mthetho kusho ukuthi izinkampani ezisebenzisa ugesi kakhulu sezingaqhubeka nezinhlelo zazo zokwakha iziteshi zazo zokuziphehlela ugesi. Umcikilisho osasele ngowokubhalisa enhlanganweni elawula imboni kagesi iNational Energy Regulator of South Africa (iNersa). Nakuba iziteshi ezisungulwa ngenhloso yokuthi kube nogesi owugadingozi kungadingeki ukuthi zona zibhalise.
Asikazi ukuthi yini ezodingeka ukubhalisa kodwa siyathemba kuzoba wuhlelo olulula. Loku kuvuselela ithemba emabhizinisi amaningi aphazanyiswa wukucinywa kukagesi alahlekelwe yisikhathi nemali. Kuvula ithuba lokudoba abatshalimali abasha, nobekungelula ukubathola ngenxa yokushoda kukagesi.
Okunye lo mthetho ngovumayo ukuthi izinkampani zikwazi ukuphehla ugesi endaweni ethize kodwa ziwusebenzise kwenye indawo. Loku kubaluleke kakhulu uma sikhuluma ngogesi ongaphehlwa ngamalahle. Njengokuthi kungenzeka ukuthi lapho kunelanga futhi kuvunguza umoya khona kungabi yilapho ugesi udingeka khona. Loku kuvumela nokuthi izinkampani zikwazi ukuthenga ugesi nakwabanye abantu (ngale kuka-Eskom).
Lokhu kuzodinga ukuthi izinkampani zithembele ku-Eskom ukuthutha ugesi kanti kuzoncika ekutheni kuzokwenzeka ngendlela elula kanjani futhi kuzobiza malini. Nengqalasizinda yomasipala izodingeka.
Lokhu kuchibiyela akusho ukuthi yonke into ihamba kahle, kunezinto eziningi ezingacacile. Kubonakala sengathi umthetho uyavuma ukuthi umuntu oyedwa ophehla ugesi adayisele abantu abaningi kodwa futhi indlela okubhalwe ngayo ayicacile kahle. Kubonakala sengathi futhi awubavumeli omasipala ukuthi bakwazi nabo ukuwudayisa ugesi, nokungase kwenze kube lukhuni ukuthenga kubaphehli bakagesi abazimele. Ayicacile futhi indaba yokugcinwa kukagesi yona izothiwani – kuyadingeka zicaciswe lezi zinto.
Sekusezandleni zeNersa no-Eskom manje. Kumqoka ukuthi basebenzise umthetho ukuvumela ukuthi bande abantu abaphehla nabadayisa ugesi. Sizoqhubeka sikukhankasele loku.
Lolu shintsho luyimiphumela yempumelelo yomsebenzi wokubambisana phakathi komNyango wezeziMali neHhovisi likaMengameli, i-Operation Vulindlela. Le mpumelelo iyasiza ukuvuselela ithemba kosomabhizinisi. Ezinye izinto ezisekhaleni le-Operation Vulindlela wukuhlukanisa (kathathu) u-Eskom, ukuthuthukisa indlela esithola ngayo umoya wokudonsa i-internet i-spectrum, ukuphucula ingqalasizinda yamanzi nokushintsha ukusebenza kwamachweba angaphansi kukaTransnet nokunye.
Uma konke loku kwenzeka, kuningi okuzophucula indlela amabhizinisi asebenza ngayo eNingizimu Afrika, kukhulise umnotho futhi kunyuke nentela engenayo.
Kumele siyizwe siyibhekisise indaba yomphumela omubi wemibhikisho nokuvalwa kwezwe ebantwini besifazane, ikakhulukazi abamnyama. Angaphezu kuka-40% amakhaya aphethwe ngabantu besifazane eNingizimu Afrika.